Dhagayso:- Xildhibaan sheegay in guddiga Khilaafeed lamagacaabay ay labaduba yihiin sharci daro + Sababaha ay sharci darrada kunoqdeen.
December 5, 2018 marqaan Faallooyinka, Somalia, Wararka Maanta 0
Guddoomiyaha arrimaha gollaha baarlamaanka Puntland Yuusuf Maxamed Axmed (Gaacashe), oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa qadka telefoonka kula hadlay waxaana ka wareystay xaaladaha siyaasadeed ee Puntland iyo khilaafka soo shaac baxay ee u dhaxeeyay madaxda u sarreeysa ee dowladda Puntland.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in doorashadani soo socota ay wax badan kaga duwanaan karayso kuwii hore, isagoo intaas ku daran in iminka xilka madaxtinimo ay u taagan yihiin musharrixiintii u badnaa sooyaalka Puntland marka laga eego.
Dhanka kale, arrimaha khilaafka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Cameey oo aan wax ka weydiiyay ayaa sheegay in guddiga khilaafka uu ka askumay uusan gebigiisba ahayn mid sharci ah.
Wuxuu meesha ka saaray in wax dib u dhac ah uusan ku yeelan karaynin doorashada madaxtinimada Puntland oo loo madlan yahay 8-da bisha Jannaayo ee horraanta sanadka foodda inagu soo haya ee 2019-ka.